I-Adobe Social ne-Adobe Marketing Cloud | Martech Zone
I-Adobe Social kanye ne-Adobe Marketing Cloud
Lwesine, Disemba 13, 2012 Lwesine, Disemba 13, 2012 Douglas Karr
Ngenkathi i-Adobe ithenga i-Omniture, ngangikhathazekile ukuthi bazomane bayeke kwi analytics ngaphambili futhi imikhiqizo izolahleka phakathi kwamathuluzi abo okushicilela. Njengoba sisebenza namakhasimende amaningi ngokwengeziwe futhi sibona i-Adobe Digital Marketing Suite ihlangana ngempela, ngiyaqala ukushintsha i-mond yami. I-Test & Target iyipulatifomu enhle futhi ukuhlanganiswa okungenamthungo nokusetshenziswa okuvamile kwe-Analytics kwenza kube yinto edingekayo.
Okulandelayo yi-Adobe Social. Uma ungumsebenzisi we-Adobe Analytics, i-Adobe Social isetshenziswa kakhulu okuyimpoqo.
I-Adobe Social ingumkhiqizo owodwa wokuphatha imisebenzi yokumaketha komphakathi ekugcineni - kusukela ekuthengeni ukukhangisa, ekushicileleni kubalandeli nakubalandeli, ukushayela ukuzibandakanya nokulinganisa imiphumela yebhizinisi. Imelela hhayi kuphela isisombululo esisodwa semisebenzi esemqoka yokukhangisa kwezenhlalo, kepha umkhiqizo onenzuzo yokuhlanganiswa ne I-Adobe Marketing Cloud ukuletha ukulinganisa kwamashaneli amaningi nokwenza kahle ekuxubeni Ukusuka I-Adobe blog.
I-Adobe ibala izinzuzo eziningi ze-Adobe Social:
Khombisa i-ROI yezokuxhumana - Dlulela ngaphesheya kokuthandwa nokwabelana ngokuxhuma okwenziwa emphakathini kanye namamethrikhi webhizinisi nokukhomba ukuthi yikuphi ukuxhumana komphakathi okunomthelela ekuziphatheni kokuthenga nenani lomkhiqizo.
Lungiselela ukumaketha kwakho ngombono wokuphela kokuphela kwekhasimende - Sebenzisa ukuqonda komphakathi ukuqonda kangcono imisebenzi yamakhasimende kanye nezitayela. Yenza kube ngokwakho okwenziwayo kokumaketha ukufinyelela umuntu ofanele
Ukwenza ngcono ukusebenza kahle kwezinqubo zokuphathwa komphakathi - Sebenzisa izinhlelo zokuhamba komsebenzi ezingeni lamabhizinisi ukubandakanya izethameli emhlabeni jikelele nokuphendula izingxoxo zamakhasimende endaweni ngenkathi kulinganiswa ukulawula nokuphatha ukuphatha kuyo yonke inhlangano.
Tags: i-adobe digital marketing suitei-adobe socialanalytics media social
Imikhuba Engcono Kakhulu Yezokuhweba Komphakathi
Ukuqapha kweBrandwatch Social Media